Xog-hayaha degmada Burtinle oo sheegay inay samaynayaan canshuur dhimis – Radio Daljir
Xog-hayaha degmada Burtinle oo sheegay inay samaynayaan canshuur dhimis
Oktoobar 6, 2012 5:42 b 0
Gaalkacyo, Oct 06- Xoghayaha dawladda hoose ee degmada Burtinle Muxiyadiin Axmed Nuur ayaa waraysi uu siiyay Radio daljir waxaa uu ku sheegay inay samaynayaan qiimo dhimis dhanka canshuurahaa, si kor loogu qaado hormarinta kaabayaasha arimaha bulshada.
Xog-hayaha ayaa waraysigiisa sidoo kale ku sheegay inay dhawaan bilaabayaan mashaariic ay kor ugu qaadayaan bilicda degmada ayna kaga hortagayaan wax walboo keeni kara nadaafad darro.
Hadalka xog-hayaha ayaa ku soo aadaya ka gadaal kolkii dhawaan is-badal lagu sameeyay saraakiisha maamulka ee degmada Burtinle, waxaana soo dhaweeyay dadka deegaanka oo ku micneeyay tallaabo saan-qaad leh oo horay sii wadaysa hormarinta deegaanka.
Xog-haye Muxiyadiin ayaa bulshada reer Burtinle ugu baaqay inay ka qayb qaataan hormarinta deegaanka ayna ka qayb qaataan fududaynta canshuuraha iyo kor-uqaadista bilicda.
Dr. Saacid Faarax Garaad oo noqday R/wasaaraha cusub ee Soomaaliya.